Soosaarka Shiinaha ee Dabka Dabka Difaaca | Jiashun
Gogosha dabka, gogosha ash, gogosha dabka, gogosha barbecue maro Maro adag oo dahaarka ah
Grey, midabbo kale ayaa loo habeyn karaa baakadaha Bacda balaastiga lagu daray kartoonka, iska caabinta heerkulka sare, dab-demiska, milicsiga kuleylka. Si fudud loo nadiifiyo, biyuhu u adkaysan kari waayaan oo siigo la'aan ah, ayaa loo isticmaali karaa si isdaba joog ah.
Gogosha dabka, derin dambas, derin dabka, derin hilib lagu dubay Maro adag oo fidsan Cawl, midabbada kale waa loo habeyn karaa Baakadaha bacda lagu daro baakadaha, iska caabinta heerkulka sare, dab-demiska, milicsiga kuleylka. Si fudud loo nadiifiyo, biyuhu u adkaysan kari waayaan oo siigo la'aan ah, ayaa loo isticmaali karaa si isdaba joog ah.
Daxalka heerkulka sare ee caadiga u adkaysta oo waara.
Waxaa loo isticmaali karaa banaanka, terrace, kaambada, dhulka iyo meelo kale si looga hortago Mars, gubashada iyo dambasku inay waxyeeleeyaan ama wasakheeyaan dhulka ku wareegsan godka dabka ama foornada dubitaanka.
Haddii mid ka mid ah walxahaasi ay xiiso kuu yeeshaan, fadlan nala soo socodsii. Waan ku qanci doonnaa inaan ku siino xigasho marka aan helo mid ka mid ah faahfaahinta faahfaahsan. Waxaan leenahay khibradeena shaqsiyadeed ee R&D si aan ula kulanno mid ka mid ah meeqaamkii aan horay u soo dirnay, Waxaan u muuqaneynaa inaan helno su'aalahaaga dhowaan'waxaan rajeyneynaa inaan fursad u helno inaan kula shaqeyno mustaqbalka. Ku soo dhowow inaad iska hubiso shirkadeena.
Waxaan xallin ka soo gudubnay shahaado xirfad qaran oo si wanaagsan loogu soo dhoweeyay warshadeena muhiimka ah. Kooxdayada takhasuska leh ee injineernimada badanaa waxay diyaar u yihiin inay kuugu adeegaan latashi iyo jawaab celin. Dadaallada ugu fiican ayaa la soo saari doonaa si laguu siiyo adeegga iyo xalka ugu fiican. Qofkasta oo tixgelinaya ganacsigeenna iyo xalalkiisa, fadlan nala soo hadal adoo noo soo diraya emayl ama nala soo xiriir isla markiiba. Sida dariiqa lagu ogaado badeecadeena iyo shirkadeena. wax badan oo dheeraad ah, waxaad awoodi doontaa inaad timaado warshadeena si aad u ogaato. Waxaan si joogto ah u soo dhaweyn doonnaa martida adduunka oo dhan ilaa shirkadeena. dhis shirkad. nalalka. Fadlan runtii runtii xor ayaad u tahay inaad nala xiriirto nala xiriir ganacsi yar waxaanan aaminsanahay inaan la wadaagi doonno khibrada ganacsi ee ugu sareysa ganacsatadeena oo dhan.
Hore: Bacda dabka ka caaggan
Xiga: Mashiinka Fluororubber